ဂန့်ဂေါမြို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ နှင့် ဂန့်ဂေါမြို့နယ်တို့၏ ရုံးစိုက်ရာ မြို့ဖြစ်သည်။ ဂန့်ဂေါနယ်မှာ ပခုက္ကူခရိုင်၏ အနောက် မြောက်ဘက်နယ်ဖြစ်၍ အရှေ့ဘက်၌ပုံတောင်၊ အနောက်ဘက်၌ ချင်းတောင်တို့၏ စပ်ကြားတွင် တည်ရှိသော ကျဉ်းမြောင်းရှည်လျားသည့် မြေနိမ့်ဒေသကလေးမျှသာ ဖြစ်သည်။ မြို့နယ်၏ အကျယ်အဝန်းမှာ ၆၉၈ စတုရန်းမိုင်မျှ ဖြစ်လေသည်။ မြို့ပေါ်ရှိ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၁၃,၃၉၃ ဦး  ဖြစ်သည်။ မြို့နယ်အတွင်း၌ ယောလူမျိုးအများ နေထိုင်သည်။
ဂန့်ဂေါမြို့သည် မြစ်သာမြစ်၏ လက်ျာဖက်ကမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ထီးလင်းမြို့မှ ကလေးမြို့သို့သွားသော နွေရာသီ ကားလမ်းသည် ဂန့်ဂေါမြို့ကိုဖြတ်လျက် ရှိ၏။ စွယ်တော်ရှင် စေတီသည် ဂန့်ဂေါမြို့ရှိ တန်ခိုးကြီးစေတီတော် ဖြစ်သည်။ ‌ေယောဆရာ‌ေတာ်၊ မုံလယ်ဆရာတော်၊ ကေျာက်ဂူဆရာ‌ေတာ် တို့သည် ထင်ရှားသော ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များဖြစ်သည်။ မြို့နယ်တစ်ခုလုံးသည် ရေအလို့ငှာ မြစ်သာမြစ်ကို အားကိုးရသည်။ ဂန့်ဂေါမြို့တွင် ပိုးထည်၊ ချည်ထည် လုပ်ငန်း အတော်အတန် ထွန်းကားသည်။ ဂန့်ဂေါဒေသမှထွက်သော ဂန့်‌ေဂါယောလုံချည်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးကျော်ကြားသည် 
ဂန့်ဂေါမြို့ကို ၁၂၄၆ ခုနှစ်တွင် မစ္ဆဂီရိ ပုန်ကန်မှုကို သွားရောက်နှိမ်နင်းစဉ် အရေးနိမ့်ခဲ့ရသော နယ်နှင်ဒဏ်ခံ ဗိုလ်မှူးတပ်မှူးများက စတင်တည်ထောင်သည်ဟု ဆိုသည်။ တည်စက ကံ့ကော်အမည်ရှိ ကျေးရွာကလေး တရွာမျှသာ ဖြစ်၍၊ တစတစ တွင်ကျယ်လာပြီးနောက် ဂန့်ဂေါမြို့ဟူ၍ ဖြစ်လာသည်။
↑ ၃.၀ ၃.၁ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၁၃၉။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂန့်ဂေါမြို့&oldid=518015" မှ ရယူရန်